Izindlela Ezisheshayo Nezilula Zokusheshisa Isiza Sakho | Martech Zone
Izindlela Ezisheshayo Nezilula Zokusheshisa Isiza Sakho
NgoLwesibili, Agasti 30, 2011 NgeSonto, uJanuwari 19, 2014 Douglas Karr
Ngomhlinzeki wethu wokusingathwa, ngaziswa ku I-CloudFlare. Kwangimangaza ngokuphelele ukuseva… ikakhulukazi intengo yokuqala (mahhala). Lapho ngisebenzela umhlinzeki omkhulu we-SaaS, salungisa izinsizakalo ze-geocaching futhi sasibiza amashumi ezinkulungwane zamaRandi ngenyanga. ICloudFlare ayakhelwe umhlinzeki we-SaaS, kepha iphelele kuwebhusayithi yakho noma kubhulogi.
ICloudFlare iyisevisi esebenzisa ubuchwepheshe bokuphathisa ukwenza amawebhusayithi agijime aphephe futhi asheshe emhlabeni wonke. ICloudFlare njengamanje isebenzisa izikhungo zedatha eziyi-12 (nokunye kusendleleni) kumazwekazi amathathu ukuhlinzeka ngokulondolozwa kokuqukethwe okungaguquki, ukuhlunga i-bot nokuningi. Nakhu ukubuka konke kwensizakalo:
Isevisi isivele yaba mnandi kakhulu Martech Zone. Bheka i- analytics ngezansi, ikakhulukazi amashadi asezansi kwemibiko.
Ngaphambi kokusebenzisa i-CloudFlare, bengidlula imikhawulo ethile yokusebenzisa ku-akhawunti yami yokubamba. ICloudFlare inciphise lokho kusetshenziswa ngesigamu - ithatha ukubukwa kwamakhasi ayisigamu sesigidi futhi yonga ngaphezu kwe-5Gb yomkhawulokudonsa. Uma kwenzeka ufuna ukwazi ukuthi lezi zinhlelo zikwenza kanjani lokhu… izikhungo zedatha zisethwa esifundeni ezweni lonke. Lapho othile esifundeni sokuma kwezwe ecela ikhasi lakho, lelo khasi ligcinwa endaweni yangakini. Lapho umuntu olandelayo evakashela - kunokuphinda asebenze kusuka kuseva yakho, isikhungo sedatha seCloudFlare sisebenzela ikhasi.
Ngaphezu kwalokho, selokhu ngasebenzisa le nsizakalo, ngibonile ukwehliswa okukhulu kokufakwa kwamazwana we-BOT SPAM. Kubonakala sengathi i-CloudFlare yenza umsebenzi omuhle ekuvimbeleni leyo thrafikhi ukuthi ingafinyeleli kuseva nayo. Ukuphela kokugxekwa engingakuthola kuwebhu mayelana ne-CloudFlare ukuthi abawasebenzisi amakhasi ngokushesha okukhulu; noma kunjalo, angikaze ngibone noma iyiphi i-latency futhi umphathi wami ungaphandle kweCalifornia.
Uma usebenzisa ibhulogi, iwebhusayithi noma uhlelo lwe-ecommerce futhi ungakwazi ukukhokhela ukuthuthukiswa kokulondolozwa kwesilondolozi, noma izinsizakalo zokugcina isilondolozi ezinjenge-Akamai… lesi yisixazululo esihle kuwe! Izikhathi zokulayisha ikhasi zibaluleke kakhulu ekukhuleni kwamanani wokuchofoza kanye nokuma ezinjini zokusesha. Izinguquko ezimbalwa ze-DNS (ezibhalwe kahle) futhi uvukile futhi usebenza ne-CloudFlare!
Tags: isishogooddataumlandoihhotelakanjani isabelomali semikhiqizoisabelomali semithombo yezokuxhumanaisimo senhlalouhlelo lokusebenza lomlilo wasendle
Ungagxila Kuphi Ekumaketheni Kwakho Kwe-B2B
TweetTwo: Umlayezo Okulungile, Isikhathi Esifanele, Indawo Efanele
Aug 30, 2011 ngo-4: 56 PM
Bengisebenzisa i-Cloudflare kusukela entwasahlobo futhi ngithole into efanayo. Kube kuhle ukusheshisa amasayithi futhi uma kwenzeka isiza sakho sehla bangagcina inguqulo yayo online isikhashana. Kumele kube nensizakalo yawo wonke amawebhusayithi kulezi zinsuku.